Rekonq 0.9 yakaburitswa (Nhau, ruzivo, nezvimwewo) | Kubva kuLinux
Rekonq 0.9 yakaburitswa (Nhau, ruzivo, nezvimwewo)
Mashoma apfuura mazuva mashoma mhando 0.9 ye rekonq.
Mwedzi mumwe chete wapfuura Ndakavaudza nezvenhau izvo zvataizove nazvo mushanduro iyi, ini ndinotaura pano zvakare:
Pfungwa yekushandisa muma URL, izvi zvichaedza kufungidzira kuti ndeipi webhusaiti iyo mushandisi yaanovhura uye kuratidza mazano. Kare ajam akataura nezvazvo pano y pano.
Yakagadzirisazve kodhi yeiyo MushandisiAgent uye iyo UI.
Tsigiro yekufananidza (sync). Tsigiro yemaphasiwedi, nhoroondo uye mabhukumaki. Parizvino ichangobata masaiti eFTP, asi basa ratovepo kuwedzera rutsigiro rweimwe nzira dzakawanda (Mozilla Sync, Git Repos, Google Bookmarks, WebDAV, Digg) mushanduro dzemberi.
Shanduko muWebKit sarudzo:
Wakawedzera tabo pamapeji eRekonq, izvo zvinoita kuti zvive nyore kuvashandisa.
Kunatsiridzwa kwekubata kurodha pasi pamwe nepeji rekurodha pasi, zvichiratidza kana iyo faira rabviswa uye kana riripo chaiko
Kugadziriswa maererano nemifananidzo, kunyanya zvimwe zvine chekuita nemafavicons ewebhu zvakagadziriswa.
Hot makiyi. Izvi zvakatumirwa kubva ku Arora uye akagadziridzwa zvichitevera kuitwa kwe Konqu Emperor.
Mushandisi musangano manejimendi. Pakupedzisira rekonq ichatanga zvakanaka kana chikamu KDE kudzorerwa
Tsigiro yewebhu kunyorera. Tsananguro yeizvi inogona kuonekwa muvhidhiyo inotevera: Vhidhiyo paYouTube
Munguva pfupi ichave ichiwanikwa munzvimbo medu pachedu, asi kune vasingashiviriri iwe unogona dhawunirodha zvakananga kubva KDE-Apps.org ????
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » Rekonq 0.9 yakaburitswa (Nhau, ruzivo, nezvimwewo)
Ini ndangobva kunyora nezvazvo ndichiyedza iyo nyowani vhezheni kubuntu 12.04
Ndakaona icho webapps chinhu muvhidhiyo mavakaratidza mashandiro azvo, asi kana uchinyora iyo vhezheni inowanikwa kubva git handina kuwana mashandiro aya, wakamboedza here kuti uone kuti inoshanda sei kana ichiitwa neimwe nzira. ?
haha, hongu, icho reggaeton chinhu chakanyanya kuipa kupfuura software yekudyara ye stallman, kuti kana tichifanira kuibvisa
Chaizvoizvo ini handi gadzirise Arch parizvino, saka handina Rekonq 0.9… zvinotora mazuva mashoma kuti uvandudze 🙁
Dzimwe nguva zvinonditadzira kana ndikawedzera chandinofarira chinoita tsaona uye kana ndikachivhara meseji yekukanganisa inoonekwa: / Zvinoitika kune mumwe munhu here?
Pindura kuna vicky
Yese nguva mune yangu kesi haina kugadzikana, mune imwe posvo ini ndangoti izvozvi.Zvino zvese kde zviri kuvandudzwa kusvika 4.8.1 uye pakati peaya magadzirirwo anouya reconq 0.9 ... regai tione kana zvichiita nani
Pindura kuna tavo
Kana zvikaitikawo kwandiri, zvakawanda zvine mamaki.
reKonq chirongwa icho, zvinosuruvarisa, chichiri chakati girinhi, uye kunyangwe ichifambira mberi mushe neshanduro yega yega, ichine madiki madudu. Vashandisi ve KDE vachiri kumirira imwe yechokwadi imwe Firefox kana Chromium, nekuti zvese zvakarongedzwa muQt nhasi hazvina kukwana (kana Qupzilla).
Pindura kuna Wolf
Pindura kune pandev92
Waizviziva ... Trisquel?
Android Market inofa, Google Play Store inoberekwa